ကုမ္ပဏီသမိုင်း - Sichuan Zili Machinery Co., Ltd
·ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် 2002 ခုနှစ်တွင် Sichuan Ziyang Zili Grain And Oil Machinery Co., Ltd ဟုခေါ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် rotary valve နှင့် two-way diverter valves များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
·2003 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဂျုံမှုန့်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကြီး3ခုထံမှ အမှာစာစာချုပ်3ခုကို ရရှိခဲ့ပြီး အရောင်းပမာဏ ယွမ် 1.2 သန်း ရရှိခဲ့သည်။ ပြည်ပမှ စပါးနှင့် ရေနံကုမ္ပဏီ အများစုသည် လော့ခ်ချခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းလွှဲသည့် အဆို့ရှင် ထုတ်ကုန်များကို တင်သွင်းသည့် အခြေအနေကို ချိုးဖောက်၍ ဖြစ်သည်။
·2004 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ rotary valve သည် ပြင်ပ bearing ကို အသုံးပြု၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြည်တွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများကို ဒုက္ခပေးသော အမှုန့်ယိုစိမ့်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ 2004 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းပမာဏ ယွမ်4သန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
·2005 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရောင်းပမာဏ ယွမ်6သန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။
·2006 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို ချဲ့ထွင်ပြီး ယွမ် 12 သန်း ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။
·2008 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုကို ဆက်လက်ချဲ့ထွင်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားဈေးကွက်ကို တဖြည်းဖြည်းဖွင့်လှစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ မလေးရှားနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဆီ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ထိုနှစ်၏ ဇွန်လတွင်၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများရှိနေသည့် သုံးစွဲသူများထံမှ တုံ့ပြန်ချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်များသည် အလွန်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပြီး တင်ပို့ပြီးသော ကုန်ပစ္စည်းအစုံ 300 ကို ဖောက်သည်များအတွက် ထုတ်ကုန်အသစ်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။ ဖောက်သည်များကို ဦးစွာပထမ၊ အရည်အသွေးကို ရှေးဦးစွာ ယုံကြည်သည် ။
·2010 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို ဆက်လက်ချဲ့ထွင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်မှုစက်ရုံကို စတင်တည်ဆောက်ကာ SF ဆီမပါသော ကိုယ်တိုင်ချောဆီတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်း Yihai Kerry Group နှင့် COFCO တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ပြတ်လပ်နေပြီး အရောင်းပမာဏ ယွမ် 18 သန်း ရရှိခဲ့သည်။ .
·2012 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်မှုစက်ရုံတည်ဆောက်မှု ပြီးစီးခဲ့ပြီး ယွမ် 26 သန်း ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါသည်။
·2013 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် R&D နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြင့်လာကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် မွမ်းမံပြင်ဆင်ကာ အမျိုးသားနည်းပညာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုရန်ပုံငွေ၏ ပထမအသုတ်ကို ရယူကာ CNC ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို တည်ထောင်ကာ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် rotary valve device နှင့် two-way diverter valve အတွက် ယွမ် ၃၂ သန်းကို ရောင်းချခဲ့သည်။
·2014 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းသစ်တီထွင်သောထုတ်ကုန်များသည် နိုင်ငံတော် အသုံးဝင်မှု မော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့် လက်မှတ်ကို ရရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသားအဆင့် နည်းပညာမြင့် လုပ်ငန်း သုံးသပ်ချက် အောင်မြင်ပြီး ပထမဆုံး အစိုးရ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ပရောဂျက် ရန်ပုံငွေများကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ 2014 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီသည် အရောင်းဝင်ငွေ ယွမ် 36 သန်း ရရှိခဲ့သည်။
·2017 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Tianfu (Sichuan) Joint Equity Exchange Center Technology Finance Board တွင် အောင်မြင်စွာ စာရင်းသွင်းခဲ့ပါသည်။ ဇူလိုင်လတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းလိုင်စင် အရည်အချင်းစစ်ကို ရရှိခဲ့ပြီး အမျိုးသားအဆင့် နည်းပညာမြင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ယွမ် ၃၈ သန်းဖြင့် ရောင်းချ၍ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
·2018 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် CE လက်မှတ်ရရှိပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ဥရောပနှင့် အမေရိကဈေးကွက်များသို့ တရားဝင်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ထူးထူးခြားခြားရလဒ်များကို ရရှိခဲ့သည်။ ယွမ် သန်း 50 ရောင်းရငွေ..
·2019 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအမည်ကို Sichuan Zili Machinery Co.,ltd သို့ပြောင်းခဲ့ပြီး အရောင်းပမာဏ ယွမ် 56 သန်း ရရှိခဲ့သည်။
·2020 ခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးနှစ်စီမံကိန်းအသစ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်- လက်ရှိ rotary airlock နှင့် two-way diverter valve ထုတ်ကုန်များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ဖော်ဆောင်ရောင်းချခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည် သုံးစွဲသူများအား အမှုန့်နှင့် အမှုန်အမွှားထုတ်လွှတ်သည့် အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်သည် တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လာပါသည်။ .
3-Way Diverter Valve, rotary valve, rotary feeder, လော့ခ် အဆို့ရှင်, Electronic Control Valve,3Way Ball Valve,